မိုိုနာလီဇာ အေဂျင်စီမှ ဦးစီးကျင်းပသော.... Mr & mr.s ပြိုင်ပွဲကြီးတွင် ဗီဗာဟိန်း ၊ကျော်ကျော်နန္ဒ နှင့် စည်သူပလပ်ကျွတ် တို့ တက်ရောက်ဖျော်ဖြေခဲ့ Chat Conversation End Typeamessage... - Zeekwat Hot News
July 15, 201905195
မိုိုနာလီဇာ အေဂျင်စီမှ ဦးစီးကျင်းပသော…. Mister , Miss, Mrs မိုနာလီဇာ.2019 မိုနာလီဇာ အလှမယ် ၊ အလှမောင် နှင့် အနုပညာမောင်မယ်များ ရွေးချယ်ပြိုင် ပွဲကြီး
မိုိုနာလီဇာ အေဂျင်စီမှ ဦးစီးကျင်းပသော…. Mister , Miss, Mrs မိုနာလီဇာ.2019 မိုနာလီဇာ အလှမယ် ၊ အလှမောင် နှင့် အနုပညာမောင်မယ်များ ရွေးချယ်ပြိုင် ပွဲကြီးကို july 14.7.2019 တနင်္ဂနွေ နေ့ နေ့လယ် ၁ နာရီအချိန်က စတင်ကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် ။
ထိုပွဲတွင် ဖိတ်ကြားထားသော အကဲဖြတ်ဒိုင်လူကြီးများ.၊ အနုပညာရှင်များ ၊ ဧည့်သည်တော်များ ၊ ဧည့်ပရိတ်သတ်အပေါင်းများနှင့်လဲ စည်းကားသိုက်မြိုက်စွာကျင်းပါခဲ့ပါတယ် ။
ထိုအပြင် ပါဝင်အားဖြည့်ကူညီ သီဆိုဖျော်ဖြေခဲ့ကြသည့် အနုပညာရှင်များဖြစ်သော ကျော်ကျော်နန္ဒ ၊ စည်သူ (ပလတ်ကျွတ်) ၊ ဗီဗာဟိန်း စသည့်အနုပညာရှင်များစွာမှလဲ ပါဝင်ဖျောဖြေခဲ့ကျပါသည် ။
Source: မိုိုနာလီဇာ အေဂျင်စီ
မိုနာလီဇာ အဂေငျြစီမှ ဦးစီးကငျြးပသော….
Mister , Miss, Mrs မိုနာလီဇာ.2019
မိုနာလီဇာ အလှမယျ ၊ အလှမောငျ နှငျ့ အနုပညာမောငျမယျမြား ရှေးခယျြပွိုငျ ပှဲကွီးကို july 14.7.2019 တနင်ျဂနှေ နေ့ နလေ့ယျ ၁ နာရီအခြိနျက စတငျကငျြးပခဲ့တာဖွဈပါတယျ ။ ထိုပှဲတှငျ ဖိတျကွားထားသော အကဲဖွတျဒိုငျလူကွီးမြား.၊ အနုပညာရှငျမြား ၊ ဧညျ့သညျတျောမြား ၊ ဧညျ့ပရိတျသတျအပေါငျးမြားနှငျ့လဲ စညျးကားသိုကျမွိုကျစှာကငျြးပါခဲ့ပါတယျ ။ ထိုအပွငျ ပါဝငျအားဖွညျ့ကူညီ သီဆိုဖြျောဖွခေဲ့ကွသညျ့ အနုပညာရှငျမြားဖွဈသော ကြျောကြျောနန်ဒ ၊ စညျသူ (ပလတျကြှတျ) ၊ ဗီဗာဟိနျး စသညျ့အနုပညာရှငျမြားစှာမှလဲ ပါဝငျောဖွခေဲ့ကပြါသညျ ။